Egbu egbugbu na dragọn, n'ebe ọdịda anyanwụ ka ọ bụ n'ebe ọwụwa anyanwụ? | Igbu egbugbu
Egbu egbugbu na dragọn, n'ebe ọdịda anyanwụ ka ọ bụ n'ebe ọwụwa anyanwụ?
Na Cerezo | | Echiche antgha
Ihe nile di nma na dragon, di m kwuru. Iji nye ya otuto o nwere t-shirts nwere dragọn, ọnụ ọgụgụ dragon, biya biya na dragọn, akwụkwọ dragon, egwuregwu egwuregwu na dragọn, akwụkwọ mmado dragon ... ọ pụghị ịrahụ ụra na-enweghị Little Tooth, anụ ọhịa ya jupụtara na dragon. Ọ bụ ya mere o ji bụrụ oge tupu ọ tụlee ịtụgharị egbugbu na dragọn.
Ma, Ọ bụrụ na ị na-amasị ndị a mara mma ụmụ anụmanụ, ọ bụghị otú ahụ mfe ịbụ ndị sitere n'ike mmụọ nsọ na egbugbu na dragọn. N’ezie, ajụjụ nke mbụ gbatara anyị n’obi nwere ajụjụ mbụ ọ jụrụ. Anyị gara maka imewe dragon ọdịda anyanwụ ma ọ bụ ọwụwa anyanwụ? Anyị ga-enyocha ha abụọ n'okpuru.
1 Dragọn nke ọdịda anyanwụ, ogologo anụ ahụ nwere nku
2 Dragọn ahụ ọwụwa anyanwụ, amamihe na-ese n'elu mmiri
Dragọn nke ọdịda anyanwụ, ogologo anụ ahụ nwere nku
Mmekọrịta dị n'etiti nnukwu dragon abụọ (ọdịda anyanwụ na ọwụwa anyanwụ) dị oke mma, ebe ọ bụ na, ọ bụ ezie na ha na-abụkarị ndị na-emegide onwe ha, ha nwere ihe ndị jikọrọ ha abụọ.
Nke mbu dragọn ọdịda anyanwụ ahụ bilitere site na akụkọ ifo Greek oge ochie, ma chee ya dị ka nnukwu anụ mmiri. N'ịbụ ndị ndị na-akpụ akpụ buru ibu, dị ka agụ iyi, agụ iyi ma ọ bụ agwọ, sitere n'ike mmụọ nsọ, dragọn ndị dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ nwere nku, na-eku ume ma ha adịghị mma nke ukwuu. A na-eji ha n'ọtụtụ akụkọ dịka njirimara nke ihe ọjọọ (dịka na apocalypse) na dike ga-egbu iji zọpụta onwe ya na ndị ọ hụrụ n'anya.
Dragọn ahụ ọwụwa anyanwụ, amamihe na-ese n'elu mmiri
Kama, dragon ọwụwa anyanwụ bụ nke na-abụghị. O sitere na China, ufodu na-ekwu na na mkpokọta nke a na-anọchi anya ya na ụfọdụ agbụrụ, nke ga-eme ka ọdịdị ya dị ogologo. Ọ bụ ezie na ahụ ha yiri nke agwọ, dragọn ndị dị n’ebe ọwụwa anyanwụ nwere àgwà ndị anụmanụ ndị ọzọ kpaliridị ka ụmụ mgbada na aji. Ọzọkwa, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ha enweghị nku.
N'ebe ọwụwa anyanwụ, n'ikpeazụ, dragọn enweghị nkọwa na-adịghị mmaN’aka ozo: ha bu anumanu ndi nochiri anya odida nke uwa, nke oma ma ma amamihe.
Anyị na-atụ anya na edemede a gbasara egbugbu na dragọn nyerela aka kpalie gị na egbugbu na dragọn. Gwa anyị, ịmasị ụdị egbugbu a na-amasị gị. You maara ọdịiche dị n'etiti nnukwu ụdị dragọn abụọ ahụ? Hapụ ikwu!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Igbu egbugbu » Ofdị egbugbu » Echiche antgha » Egbu egbugbu na dragọn, n'ebe ọdịda anyanwụ ka ọ bụ n'ebe ọwụwa anyanwụ?
Egbu egbugbu na instep, aghụghọ na anya ọma
Obere, ọgụgụ isi ma mara mma tattoos alaka